Semalt इस्लामाबाद विशेषज्ञ: शीर्ष १० सबैभन्दा लोकप्रिय वेब क्रलर र बट्स
इन्टरनेटमा दुई प्रकारका बोटहरू हुन्छन्, जसलाई राम्रो बट्स र खराब बट्स भनिन्छ। तपाईंले खराब बट्स विरुद्ध गम्भीर उपायहरू लिनुपर्नेछ किनभने उनीहरूले DDN ब्यान्डविथ कुनै समय बिना उपभोग गर्न सक्दछन्। यसका साथै नकारात्मक वा खराब बट्सले तपाईंको वेब सामग्री चोरेर सर्भर संसाधनहरू लिन्छ। अर्कोतर्फ, राम्रो बोटहरू (जसलाई वेब क्रोलर पनि भनिन्छ) होशियारीपूर्वक ह्यान्डल गरिनुपर्दछ किनकि यसले खोज वेबसाइटमा बिंग, गुगल, र याहू जस्ता खोज इन्जिन परिणामहरूमा तपाईंको वेबसाइटलाई अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्दछ।
माइकल ब्राउन, Semalt का एक अग्रणी विशेषज्ञ, आश्वासन दिन्छन् कि सयौंदेखि हजारौं बोटहरू र वेब क्रलरहरू इन्टरनेटमा स्काउर गर्दै छन्, तर निम्न व्यक्तिहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्।
Googlebot एक अहिले सम्मको सब भन्दा राम्रो र प्रख्यात वेब क्रलर हो। यो व्यापक रूपमा Google मा खोज परिणामहरूको लागि वेब सामग्री र लेख अनुक्रमणिकाको लागि प्रयोग गरिन्छ। गुगलबटको उत्तम सुविधा यो हो कि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै उपकरण र विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। अधिक विशेष रूपमा, Googlebot Google लाई बताउँछ कुन पृष्ठहरू अनुक्रमित गरिनु पर्छ र कुन पछाडि छोडिनु पर्छ।
Googlebot जस्तै, Bingbot माईक्रोसफ्ट द्वारा एक लोकप्रिय वेब क्रलर हो। यो लगभग बर्ष को लागी गरीएको छ र बिंग खोज परिणामहरु मा अनुक्रमणिका वेबसाइटहरु हो। बिंगबोट एमएसएन बोटको लागि एक आदर्श प्रतिस्थापन हो। यसको सबैभन्दा प्रमुख विकल्पलाई बिंगबटको रूपमा ल्याउनुहोस् भनिन्छ, जुन बिंग वेबमास्टर उपकरणमा अवस्थित छ। यो विकल्पले तपाईंलाई पृष्ठहरू अनुक्रमणिका हुन र बिंग परिणामहरूमा देखाउन अनुरोध गर्दछ।
Sl. स्लर्प बोट
Slurp Bot याहूको वेब क्रलर हो तर बिंग द्वारा संचालित हो। वेबसाइटहरूले याहू Slurp याहू मोबाइल खोजी परिणामहरूमा देखा पर्नको लागि उनीहरूको पृष्ठहरू पहुँच गर्न अनुमति दिनुपर्दछ। यो वेब क्रलर याहू न्यूज, याहू खेलकुद र याहू फाइनान्समा समावेशको लागि पार्टनर वेबसाइटहरूबाट सामग्री स to्कलन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
DuckDuckBot DuckDuckGo को प्रसिद्ध र सबै भन्दा राम्रो वेब क्रलर हो। यो खोज इञ्जिन यसको गोपनीयताका लागि परिचित छ र प्रयोगकर्तालाई उसको अनुमति बिना ट्र्याक गर्दैन। औसतन, यसले प्रत्येक दिन १० लाख प्रश्नहरू सम्हाल्छ। डक डकगोले 400०० भन्दा बढी स्रोतहरूबाट नतिजा प्राप्त गर्दछ, साथै धेरै ठाडो स्रोतहरू सहित तत्काल उत्तरहरू, विकिपेडिया र डकडबटसँग सम्बन्धित जवाफहरू प्रदान गर्दछ। यसले यान्डेक्स, बिंग, र याहू जस्ता स्रोतबाट आएका क्वेरीहरू पनि सम्हाल्छ।
बैडसपाइडर एक चिनियाँ खोज ईन्जिनको वेब क्रलर वा माकुरोको आधिकारिक नाम हो। यसले प्रत्येक दिन धेरै वेब पृष्ठहरू सूचकांक गर्न सक्छ र यसको बाइडू सूचकांकमा अपडेटहरू फर्काउँछ। बाइडू एक अग्रणी चिनियाँ खोज ईन्जिन हो। योसँग चीन मेनल्याण्डको समग्र खोज बजारको अस्सी प्रतिशत भन्दा बढी सेयरहरू छन्।
Y. Yandex Bot
YandexBot एक रूसी खोज इन्जिन Yandex को एक विशेष वेब क्रलर हो। मिडिया आउटलेटहरू यो बोटले २०१bमा रूसमा सबै खोज इञ्जिन ट्राफिकको% 57% भन्दा बढी उत्पन्न भएको दावी गर्दछ।
7. Sogou स्पाइडर
सोगौ स्पाइडर Sogou.com को प्रसिद्ध वेब क्रलर हो। यो अग्रणी चिनियाँ खोज ईन्जिन २०० 2004 मा सुरू गरिएको थियो र एलेक्सामा १० 10 को श्रेणी छ। तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि सोगौ वेब स्पाइडरले रोबोट.टक्सट इन्टरनेट मानकलाई कहिले पनि सम्मान गर्दैन र यसको अत्यधिक क्रलिंगको कारण विभिन्न साइटहरूबाट प्रतिबन्धित छ।
यो वेब क्र्रालर एक्सल्याड, एक फ्रान्सेली खोज इञ्जिन द्वारा संचालित हो। यो केही वर्ष पहिले स्थापना भएको हो र यसको खोजी परिणामहरूमा अनुक्रमणिका सोह्र अरब वेब पृष्ठहरू छन्।
Facebook। फेसबुक बाह्य हिट
सामाजिक मिडिया जायन्ट, फेसबुक, आफ्ना उपयोगकर्ताहरु लाई अन्य फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु संग रोचक लिंक साझा गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। फेसबुक बाह्य हिट विभिन्न प्रकारका कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ, धेरै छविहरूको प्रदर्शन सहित, केहि उत्साहजनक भिडियोहरू, र केही वेब पृष्ठहरू। मुख्य र प्रख्यात क्रलिling्ग बट्स मध्ये एक फेसबोट हो जसले विज्ञापन प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
१०. अलेक्सा क्रॉलर
एलेक्सा क्रॉलर अमेजनको एलेक्सा द्वारा संचालित हो र दर्जनौं वेब पृष्ठहरूमा अनुक्रमणिकामा प्रयोग गरिन्छ। यसले वेबसाइटहरूको बारेमा जानकारी स .्कलन गर्दछ र तिनीहरूलाई स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूको आधारमा राख्दछ।
त्यहाँ धेरै वेब क्रॉलर र बोटहरू छन्, त्यसैले जब तपाईं केही शंकास्पद वेबसाइट रोक्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले राम्रो बट्सलाई रोक्नुहुन्न जुन तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई खोजी ईन्जिन नतीजाहरूमा अनुक्रमणिका गर्दछ।